घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? सही सिमेन्ट यसरी छान्नुहोस्
केही दशक अघिसम्म घर निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग खासै हुँदैनथ्यो । गाउँघरतिर सिमेन्ट प्रयोग गरेर घर बनाउन थालेको त केही वर्षयता मात्रै हो ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। केही दशक अघिसम्म घर निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग खासै हुँदैनथ्यो । गाउँघरतिर सिमेन्ट प्रयोग गरेर घर बनाउन थालेको त केही वर्षयता मात्रै हो । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
अब भने सिमेन्टबिनाको घर निर्माण कल्पना गर्न पनि नसकिने भइसकेको छ । घरमात्रै होइन, पुल, बाँधजस्तो विकासका आयोजना सिमेन्टबिना निर्माण नै हुन नसक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय त सडक निर्माणमा पनि सिमेन्ट प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
आफ्नो सपनाको घर बलियो अनि सुरक्षित बनोस्, यो चाहना सबैको हुन्छ । तर निर्माण सामग्री त्यसमा पनि सिमेन्ट खराब पर्‍यो भने त्यसले सिंगै घरलाई कम्जोर बनाउँछ । त्यसो भए घर निर्माणमा सही सिमेन्ट कसरी छान्ने ?
संरचना निर्माण गर्दा ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरी तीन प्रकारका सिमेन्ट प्रयोग गरिन्छ । यीमध्ये ओपिसी सिमन्ट सामान्यतया ढलानका लागि प्रयोग गरिन्छ भने पिपिसी सिमेनट प्लास्टरमा प्रयोग गरिन्छ । पिएससी सिमेन्ट चाहिँ फ्ल्लोरिङ अर्थात् तलामा प्रयोग गरिन्छ । यीबाहेक नेपालमा पिएलसी र आरएचपिसी सिमेन्टको उत्पादन भइरहेको छ ।
यीमध्ये ओपीसी सिमेन्ट केही महँगो छ । यसको प्रयोग ठूला र चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ । चाँडै जम्ने यो सिमेन्ट लामो समयसम्म फर्मामा राख्नुनपर्ने हुनाले पनि परियोजनाहरुमा यसको बढी प्रयोग हुन्छ । घर र सामान्य संरचनाका लागि भने पिपिसी नै सही मानिन्छ ।
पिपिसी सिमेन्ट राम्रोसँग जम्न कम्तीमा १४ दिन लाग्छ । ओपीसी सात दिनमै जमिसक्छ । कतिपयले बिम, पिल्लर, ढलान निर्माणमा ओपिसी र प्लास्टर, गारो जस्ता काममा पिपिसी सिमेन्ट प्रयोग गर्छन् । पिएससी सिमेन्ट भने पछिल्लो समय कम खपत हुन थालेको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् ।
कुन सिमेन्ट कति गुणस्तरीय छ भनेर पत्ता लगाउन प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रयोगशाला परीक्षणका आधारमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर प्रमाणपत्र जारी गरेको हुन्छ । सिमेन्ट खरिद गर्नुपहिले त्यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ कि छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । सम्भव छ भने विभागको प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण पनि गराउन सकिन्छ । नभए निर्माण विज्ञहरुको सल्लाह पनि लिन सकिन्छ ।
सिमेन्टको गुणस्तर पहिचान गर्ने केही घरेलु उपाय पनि छन् । सबैभन्दा पहिले त आफूले खरिद गर्न लागेको सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त हो कि हैन भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसपछि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो उत्पादन मिति । उत्पादन भएको ३ महिना पुगिसकेको रहेछ भने त्यस्तो सिमेन्ट राम्रो मानिँदैन ।
लेसिलो सिमेन्ट किन्नु हुन्न । सिमेन्ट लेसिलो छ कि छैन भन्ने हातले चलाएर थाहा पाउन सकिन्छ । गिर्खा वा डल्ला परेको सिमेन्ट पनि प्रयोग गर्नु हुन्न । सिमेन्टलाई पानीमा हाल्दा तैरियो भने त्यस्तो सिमेन्ट पनि प्रयोग गर्नुहुन्न ।
सिमेन्ट रङ बढी गाढा छ भने त्यो पनि सही सिमेनट होइन । आधा किलो सिमेन्टलाई पीठो चाल्नीमा चाल्दा ९८ देखि ९९ प्रतिशत धूलो झर्यो भने त्यो उपयुक्त सिमेन्ट हो ।
सिमेन्ट एक भाग, बालुवा दुई भाग र गिट्टी तीन भाग पानीमा मुछ्नुहोस् । मिश्रणलाई मगमा राखेर मग घोप्ट्याइदिनुहोस् । १० मिनेटभित्र घोप्ट्याइएको मग झिक्दा ६० प्रतिशत मिश्रण ठाडै रह्यो भने उक्त सिमेन्ट गुणस्तरको छ भन्ने बुझ्नुहोस् ।
सिमेन्टको भण्डारण जहिले पनि सुक्खा ठाउँमा गर्नुपर्छ । वर्षाको समयमा सिमेन्ट ढुवानी गर्दा राम्ररी त्रिपाल वा ओतिने चिजले छोपेर मात्रै गर्नुपर्छ ।
समेन्ट भिज्यो भने गुणस्तर नष्ट हुन्छ । प्लास्टिक लेमिनेटेड बोरामा प्याक गरिएको सिमेन्ट किन्नुपर्छ । यस्तो बोरालाई हावापानीले असर पुर्याउँदैन । किन्नुअघि बोराको तौल जाँच्न बिर्सनु हुँदैन । यी कुराहरुमा विचार पुर्‍याइयो भने गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोगबाट बच्न सकिन्छ ।